Ngaba uyayithanda i-opera?, ICalifornia iye yaqala enye kubomi bukaSteve Jobs | Ndisuka mac
Inye into ekufuneka icace kwaye yile yokuba uSteve Jobs uya kuba ziindaba ngonaphakade kwaye kukuba enkosi kuye singonwabela iimveliso ezininzi zetekhnoloji yangoku, nokuba zenziwe yinkampani yakho okanye ziphefumlelwe yiyo.
Zininzi ziye zenzeka Iimovie ezikhutshiweyo kubomi balo mthengi wekhompyuter enkulu kunye neencwadi ezahlukeneyo ekucaciswa kuzo uninzi lweziganeko zobomi bakhe.
Ewe, ngoku, eCarlifonia akukho nto ingako kwaye akukho nto iphantsi kwe-opera ethetha ngobomi balo mntu uthandekayo oza kuqala, umntu kuthi nakwabaninzi, kubandakanya nam, esingasokuze simlibale. Lo msebenzi ugxile kwinqanaba lokugqibela lobomi bakhe Okona kubaluleke kakhulu, uya kuqala ngobomi bakhe eCarlifonia, iziko le-nerve lobomi beMisebenzi.
Le opera ikwazile ukwenziwa ngokubulela kwinto yokuba abaqulunqi bayo baphumelele isibonelelo semali kwiinkampani ze ÓIpere evela eSeattle naseSan Francisco, abaya kuthi ngayo bakhusele imali ukuze lo msebenzi ekugqibeleni ubone ukukhanya.
Le opera, enesihloko Indalo (R) yokuvela kukaSteve Jobs ibeka ugxininiso olukhethekileyo kwizigqibo ekufuneka zenziwe nguJob ebomini bakhe bonke, izigqibo ezenze amaxesha amaninzi ukuba abeke usapho lwakhe ecaleni ngenxa yokwaziswa kwemveliso ethile. Umlawuli weSan Francisco Opera, UMateyu shilvock Uthetha ngemimangaliso malunga nale opera izakubonisa, ke ukuba unokuyonwabela, musa ukuthandabuza.
Kulo ikhonkco elandelayo ungazi iinkcukacha ezithe kratya ngezi ndaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ngaba uyayithanda i-opera? ECarlifonia, enye malunga nobomi bukaSteve Jobs iye yaqala ukuboniswa